Ihe nkwụnye prosthetic
Prosthetic ịchọ mma / ngwaọrụ / ihe
Ọkpụkpụ nke elu prosthesis
Nwa nwoke dị afọ 10 si Chula Vista na-eme ememe inweta ụkwụ mgba ọsọ prosthetic ọhụrụ
site admin na 21-11-11
Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-emega ahụ́ enwetala ohere ọhụrụ ha ga-eji na-emega ahụ́. The Challenge Athlete Foundation kwadoro ụlọ ọgwụ na-agba ọsọ na Mission Bay n'ụtụtụ Satọde. Enwere ndị egwuregwu afọ niile. Ọtụtụ bụ ụmụaka, bụ ndị e bepụrụ aka na ụkwụ ha ma ọ bụ mụọ ha nwere nkwarụ anụ ahụ...
Otu nwanna nwoke na Qingdao nke yi ụkwụ prosthetic na-agba ọkụ vidiyo na ịntanetị niile! Nke a bụ mmụọ ọgụ!
site admin na 21-08-26
N'oge na-adịbeghị anya, otu nwanna nwoke nọ na Qingdao nke yi ụkwụ prosthetic na-agba ọkụ vidiyo na ịntanetị niile! Nke a bụ mmụọ ọgụ! Na May 18th N'ụlọ akwụkwọ egwuregwu Qingdao nwoke nwere ụkwụ prosthetic na ndị ọzọ na-agba ọsọ Ọ bụ Li MAO da Amụrụ na 1988, Li Maoda bụbu nwoke nwere ike na-amasị…
Ịhụnanya na prosthetics
site admin na 21-08-14
Ngwere nwere ike imegharị ma ọ tụfuo ọdụ ya, crabs nwere ike ịmalite ma ọ bụrụ na ha nwụsịrị, ma e jiri ya tụnyere anụmanụ ndị a yiri "oge ochie", ụmụ mmadụ enwekwaghị ike ịmaliteghachi n'oge evolushọn. Ikike imeghari akụkụ ụkwụ m...
Kedu ihe ị kwesịrị ịṅa ntị mgbe ị na-etinye orthosis prosthesis ụkwụ
site admin na 19-06-03
Mpụta nke aka aka aka aka bụ ihe na-enye obi ụtọ maka ndị bepụ, na-enyere ha aka dozie ọtụtụ nsogbu ndụ. Zhongkang prostheses na ngwaọrụ orthopedic na-ewebata na ọ dịghị ndị mmadụ mkpa ịnọdụ n'oche nkwagharị mgbe ha tinyechara aka aka, na ha nwere ike ịga ije naanị ha ma emezigharị ya.
© Nwebiisinka - 2020-2021: Ikike niile echekwabara.